Amasayithi e-Italian Online Casino | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
I-Temperamental Italians idume ngokuthanda kwabo ukugembula kanye nezingozi, noma kunjalo, uHulumeni wase-Italy uthathe isikhathi eside ukuba abhalise ezinye izinhlobo zokugembula. Isizathu sesimo esiqinile kule ndawo ukuthi ngeminyaka yama-90 iningi labantu lalingaluthandi lolu hlobo lokuzijabulisa. Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi ukugembula, okuningi kuhlotshaniswa neMafia. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, izinto sezishintshile futhi emashumini eminyaka amuva nje izwe liye labona ukwanda okusheshayo ekuthandeni ukugembula.
Inothi lezivakashi eziya enkombeni yethu yezokugembula eku-inthanethi ukuthi imodeli yamanje yokugembula e-Italy ihlose ukuvimbela ukuphambukiswa kwemali yabadlali base-Italy phesheya. Ukuze "unqande" abantu bendawo, abashiya ukuyodlala phesheya, wonke amazwe amakhasino atholakala eduze nemingcele nezifundazwe ezingomakhelwane.
Ngo-2007, i-Italy yayisemthethweni imidlalo yamakhadi ngokuya ngamakhono nobuciko, amandla wakamuva nezinye izinhlobo zokugembula okusemthethweni. Umzimba osemthethweni olawula ukugembula e-Italy yi-AAMS (i-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), esebenza ekuphathweni nasekunikelweni kwamalayisense. Isijeziso sokwephula umthetho singahluka - kusuka ekuhlawulisweni kuya ejele.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Italian Online ze-Casino
Ukugembula ku-intanethi e-Italy
Ukugembula ku-inthanethi e-Italy kuvunyelwe ngokusemthethweni. Ngokwenhlolovo ezahlukahlukene, ukugembula ku-inthanethi kungenye yezindlela zokuzijabulisa ezithandwa kakhulu ama-Italiya. Akumangalisi ukuthi imali etholwa ukugembula online e-Italy ikhula minyaka yonke. Kuze kube manje, abadlali base-Italy bavule ukufinyelela kuzo zombili izingosi zokugembula online e-Italy nasezindaweni zangaphandle zokugembula. Kodwa-ke, iziphathimandla zibhekisisa futhi zilawule imisebenzi yazo. Ngokomthetho wokugembula oku-inthanethi e-Italy, ngokunikezwa kwezinsizakalo zabo ezweni lonke, bonke opharetha kudingeka bathole ilayisensi ekhethekile. Ngenxa yale nqubomgomo, imboni yezemidlalo yase-Italy iyakhula, ithuthuke futhi ibe nenzuzo enkulu futhi ihehe kubatshalizimali bangaphandle.
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-Italy
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-Italy, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi.
Ungakwazi futhi ukufunda ukubuyekezwa kwethu kwamasayithi we-casino e-intanethi, ukuze uqaphele ukukhushulwa okuhle kwe-intanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakalayo kubadlali base-Italy.
ICasinoToplists uhambo luyaqhubeka futhi kulokhu sizomisa ekhaya legama elithi "ikhasino" - e-Italy enelanga. Ngokomlando, lokho kugembula kubizwa nge- “casino”, yize amaNtaliyane - “kuyindlu” nje.
I-Italy - i-geography nomlando ngamafuphi;
Isimo sengqondo somlando sokugembula esimweni somlando kusuka ku-1919 kuze kube namuhla;
Kunezinkinobho ze-5 emingcele yezwe;
kusukela i-2010 evunyelwe ukudlala kwi-casino e-intanethi.
Izindawo ezinhlanu zaseRoma e-Italy ezinamakheli;
Ulwazi olunentshisekelo ngezwe nabakhileyo kulo.
Indawo Italy kanye nesizinda somlando omfushane
IRiphabhlikhi yase-Italy - iyikhoneni elinobungane leZwe Elidala, okuyisisekelo sempucuko kanye nomnyuziyamu ovulekile.
Igama lakhe elimnene lalelizwe litholakele komakhelwane baseCyprus, kepha inani lalo liyi-prosaic kakhulu - izwe lamathole.
Lokhu kubangelwa ukuthi isikhathi eside, kwakuyizinkunzi ezaziyisibonakaliso sabantu, ngokuvamile zikhonjiswa ngokuqeda impisi yaseRoma.
Inhlokodolobha yase-Italy - iRoma yinhle, inhliziyo icwile ekukhohlweni koMbuso WaseRoma, idolobha laphakade, elalilwela abantu abaningi. Namuhla likhaya labantu abangaphezu kwezigidi ezine, izivakashi eziningi. IRoma isiphenduke izwe lomhlaba wonke, kunezivakashi ezinhle futhi ezinikeza ukuzijabulisa okuningi. Kepha inombolo yabo ayibandakanyi imidlalo yokugembula ezodlalwa, kufanele iye ekubhalisweni ngokusemthethweni kwendawo yebhizinisi. Kukhona izivakashi iRoulette, iPunto Banco, iBlackjack nemidlalo engamashumi amathathu noma amane, ama-craps, uChemin de Fer, kanye ne-poker eyintandokazi yawo wonke umuntu.
Kungaba ukuhlambalaza ukuya e-Italy ngenxa yekhasino kuphela, ngoba kukhona, mhlawumbe, enye yezindawo eziheha kakhulu emhlabeni: izinqaba, izinqaba, amabhuloho, izigodlo, izindawo zokudla, izivini, izinkundla zemidlalo, iminyuziyamu nokunye okuningi okumangazayo.
I-casino nokugembula e-Italy
Yize ama-Italiya enobudedengu kakhulu, kuze kube manje ezingeni likazwelonke akumele kuvulwe izindlu zokuGembula, ama-salon, amakhasino azimele ngisho namahholo emishini yokubheja. Noma kunjalo, kunamakhasino ambalwa e-Italy.
Ukugembula namaNtaliyane ukuma amakhulu eminyaka, abantu bayashisa futhi bayathanda ukudlala, kepha ubuKhatholika bunesimo esingesihle kulokhu kuzijabulisa. Iziphathimandla zenza ukuyekethisa futhi zenza isono saba semthethweni ukuze iqale ukuvikela izintshisekelo zezwe.
Uhulumeni wazi kahle ukuthi uma ukuvinjelwa ukugembula ngokuphelele, kuzophuma imali ezindlini zokugembula zamazwe angomakhelwane, okuyinto engathandeki nakancane. Ngakho-ke, ukunciphisa izinga lokushisa labadlali futhi ngasikhathi sinye ukugcwalisa isabelomali, emngceleni weSlovenia, iFrance, iSwitzerland neMonte Carlo kusebenza amakhasino ambalwa.
Ingqikithi e-Italy isebenza ngamakhasino ama-5, kepha akekho noyedwa kubo ongekho eRoma. Omangalisayo ikhasino e-San Remo abadlali abafisa ukudlala eMonaco noma eFrance, kuya ku-azino eCampione ogwini lwaseLugano usemngceleni waseSwitzerland, ikhasino eSan Vincent ivala indlela yokuphunyuka iye emhubheni weMont Blanc. A Izindawo ze-2 e-Venice ngeke kuvumele abantu ukuba baye ukugembula eSlovenia.
Ngokumangazayo, kuphela ngekhulu lamashumi amabili, i-Italy yayilungile kakhulu, ngaphambi kokuba ukugembula kudlale ngokukhululeka. Isikhathi eside kwahlala ikhasino elidumile laseVenetian "Ridotto".
Ngemuva kweMpi Yezwe Yokuqala, uhulumeni wavala amakhasino angama-59 aqala ukusebenzisa ukuvinjelwa okuqinile ekugembuleni kusukela ngo-1919. Kodwa uMussolini wakuqonda ukulimala kwenqubomgomo enjalo kwisabelomali sikahulumeni, ngakho-ke ngo-1927, wavula ngokusemthethweni ikhasino eSan Remo.
ICasino San Remo itholakala esithabathabeni somuzi esihle, esakhiwe ngo-1905 ngu-Eugene Ferret. Itholakala kumandla kamasipala. Isikhathi eside bekuwukuphela kwendlu yokugembula e-Italy, futhi wayekhona, ngokusho kukaMussolini kuphela njengokuqinisekiswa komthetho.
Noma kunjalo, umsebenzi wamaNtaliyane uholele eqinisweni lokuthi ngo-1933 kwasungulwa iCasino Campione d'italia. Yakhiwe ngo-1917 ngobukhazikhazi obukhethekile, obujwayelekile ngesikhathi sayo. Lesi yisakhiwo esikhulu sesikhathi esizayo okuyikhasino enkulu kunazo zonke eYurophu.
Ku-1937, imithetho yanciphisa kancane, eVenice yavunyelwa ukugembula imidlalo yamakhasino kodwa lapha ilawulwa ngumasipala.
Ngemuva kweMpi Yezwe II ephathelene nokugembula igcinwe, isebenza namakhasino amaningana, kodwa yonke imizamo yokwandisa ibhizinisi igxilile kakhulu.
Kuyathakazelisa kakhulu indaba yokutholakala kwekhasino le-4 eSan Vincent, phezulu e-Alps. Itholakala esifundeni saseValle d'Aosta, lapho kunamasiko ahlanganiswe ngokuqinile eFrance nase-Italy, kangangokuba iFrance ngo-1947 ngenhlolovo yafisa ukuzihlanganisa nensimu. Izakhamizi zaseSan Vincent zibeke umbandela waseRoma wokuthi zihlala e-Italy lapho kuzovela ikhasino. Futhi lavulwa ngejubane.
Kepha umlando wemisebenzi yekhasino yase-Italy, noma ingaphansi kwegunya likamasipala, uyazi izikhathi eziningi ezimnyama. Ukukhwabanisa okusungulwe ngokwethembeka kwabasebenzi nabaphathi abaphezulu. Futhi ngo-1983, waze wabamba izixhumanisi zekhasino iSaint Vincent neSanremo ne-mafia. Ngemuva kwaleli bhizinisi elinzima lakha kabusha futhi lashintsha indlela.
Namuhla, enhlonhlweni i-Apennine isebenza ngamakhasino ama-5, futhi kusengomasipala, izifunda zifaka isandla kwisabelomali semali etholakalayo engama-70% wenzuzo evela kumishini yokubeka, i-50% - kusuka emidlalweni yase-US, i-45% - evela IsiFulentshi.
Yize uhulumeni wase-Italy engayi emvumelwaneni yekhasino, e2010 amaNtaliyane akwazi ukudlala emakamelweni e-poker aku-inthanethi. Impumuzo enjalo yaqinisekiswa ngamakhulu ezigidigidi zentela ezitholwe kwisabelomali.
Okuqaphelekayo, yize kuyikhasino elincane e-Italy, nasenhlokodolobha abekho nhlobo, lezi zindawo seziwuhlobo lomlando nokuheha izivakashi. Izindawo zokuhlala zikanokusho ezinezinto zangaphakathi ezinhle kakhulu kade zaba yindawo yemicimbi yomphakathi, imicimbi emikhulu yomphakathi neyangasese.
IColiseum. Ikheli: I-Piazza del Colosseo, 1. Kuwuphawu lweRoma Yasendulo, isakhiwo esidala kunazo zonke esidala, okuwuphawu lwenhlokodolobha yase-Italy.
Umthombo waseTrevi. Ikheli: Piazza di Trevi. Umthombo omuhle kakhulu wamabhabhalazi wekhulu le-XVIII, owaklanywa nguNicola Salvi, udlula indawo yaseTrevi cishe amamitha angama-26, uthinta ubuhle nobukhulu.
I-Pantheon. Ikheli: Piazza della Rotonda. Isibonelo esihle kakhulu sokwakhiwa kwamaRoma, ukushaya kwangaphandle nokuhlobisa kwangaphakathi.
Isithangami samaRoma. Ikheli: Via della Salaria Vecchia, 5/6. Isikhungo sempilo yezenhlalo yeRoma lasendulo sinikeza ukuqonda okuhle kakhulu ngempilo yekhulu elidlule.
ISonto LikaSanta Paul. Ikheli: UPiazza San Pietro. Leli yisonto lobuKristu elikhulu kunawo wonke emhlabeni kanye nesakhiwo esihlaba umxhwele kakhulu seVatican.
Amaqiniso anentshisekelo nge-Italy namaNtaliyane
I-Italy - izwe elinabantu abaningi kakhulu eYurophu.
Abantu abangama-98% - amaKatolika.
I-Italy - indawo yokuzalwa yengxenye yoshizi odumile emhlabeni.
E-Italy kunezifunda ezimbili ezincane: iVatican neSan Morino.
E-Italy, ngaphezu kwezintaba-mlilo kunanoma yiliphi elinye izwe eYurophu.
I-Modern Italian - ulimi lwesigodi lwaseFlorentine, olwathandwa kakhulu ngenxa kaDante.
Italy ebalazweni laseYurophu
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Italian Online ze-Casino
2.1 Ukugembula ku-intanethi e-Italy
2.2 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-Italy
3 Ukugembula e-Italy
3.0.1 Indawo Italy kanye nesizinda somlando omfushane
3.1 I-casino nokugembula e-Italy
3.1.1 Izivakashi zaseRoma
3.1.2 Amaqiniso anentshisekelo nge-Italy namaNtaliyane
3.1.3 Italy ebalazweni laseYurophu
grande vegas amakhasino ibhonasi amakhodi akukho idiphozi